Furitaanka ciyaaraha qaramada Afrika - BBC Somali - Cayaaraha
Furitaanka ciyaaraha qaramada Afrika
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 19 Janaayo, 2013, 16:34 GMT 19:34 SGA
Xafladii furitaanka ee koobka qaramada ee Qaarada Afrika.
Xafladii furitaanka tartanka ugu wayn ee ciyaaraha kubada cagta e koobka Qaramada Afrika ayaa ka furmay Koonfur Afrika.
Ciyaarta ugu horaysa ee ka dhacaysa Johannesburg, Koonfur Afrika ayaa la ciyaaraysa Cape Verde.
Wariyaha BBC ayaa sheegaya in Cape Verde ay ka mid tahay tahay kooxaha ugu dhibcaha badan.
KOONFUR AFRICA (SOUTH AFRICA)
Kooxda qaranka koonfur Africa Bafana Bafana, waxaa la dhihi karaa waxay tartanka ku jirtaa nasiib. Sababtoo ah Awood ay leedahay uguma soo bixin tartanka. Waxay ku hartay is reereebkii.
Balse waxes nasiibkeedu yahay, iyadoo Dalka Libya oo sanadkan uu ka dhici lahaa tartanka uu ka dhacay qalalaase siyaadeed.
Waxaana Markiiba fursad ay u heshay, iyadoo laga faa'iidaysanayo garoomadii ciyaaraha adduunka in Dalka uu noqdo martigaliyaha cayaaraha koobka qaramada qaaradda Africa we sanadkan 2013. Dalka martigaliyaha ah si toos ah ayaa tartanka looga qay galiyaa.
Taageerada gudaha Dalka aad uma badna sababtoo ah labadii Sano ee ugu dambaysay way ka hartay tartanka, waxaana ka maqnaanaya cayaaryanka laf dhabarka u ahaa, Steven Pinnar oo ka fariistay cayaaraha caalamiga ah.
Tababaraha kooxda Gordon Igsund, wuxuu leedahay kooxda dadaal am yaraysan doonto balse waa in ay taageero buuxda ka Helaan taageerayaasha Koonfur Africa.
Waa Markii 7-aad oo koonfur Africa ay ka qaybgasho tartankan, waxaana ku guulaysatay mar kaliya oo ahayd sanadkii 1996, waxaana Laguna qabanayay cayaaraha dalkooda.
Waxaana hadda la is waydiinayaa kooxda koonfur Africa oo ka faa'iidaysan waysay cayaarihii adduunka ee dalkeeda lagu qabtay, suurtagal ma tahay in ay ku celisha guusha kaliya ee koobkan ay ku qaaday sanadkii 1996-dii markii cayaaruhu ka dhacayeen dalkeeda.
Cape Verde, waa dal ka kooban jasiirado yar yar oo midaysan oo dadkeedu ay gaarayaa ilaa nus million.
Waa markii ugu horaysay oo ay tartankan ka soo qaybgalaan.
Madaxwaynaha dalka Cape Verde Jorge Carlos Fonseca, oo soo gaaray Koonfur Africa, wuxuu sheegay in ay kooxdu halkan u timid in ay guulo badan soo hoyso ee ma aha in ay ka soo qaybgasho oo kaliya. Dadwaynaha Cape Verde ayuu sheegay in ay leeyihiin hami sare iyo rabitaan ah in kooxdu guulo waawayn ay soo hoyso ayuu yiri.
Sanadkan ayaa ugu horaysay ka soo qaybgalkooda, balse intii ay u soo baxayeen tartanka waxay cagta soo mariyeen kooxo waawayn sida Cameroun oo ay ay uga badiyeen labadii kulan mid wuxuu ku dhamaaday 2-0, is aragoodii labaadna barbaro ayay la galeen.
Waxaa u cayaara cayaartoy intooda badan u safta kooxo ka dhisan Portugal oo ku dhashay dalkaas.
Kooxdan oo lagu naanayso libaax-badeedyada buluugga ah, ayaa taariikhda ay u gashay in ay yihiin dalkii ugu yaraa ee abid ka soo qaybgala finalka tartanka koobka Africa.
90% boqolkiiba cayaartoyda u dheesha waxay ka cayaaraan Portugal, France, Spain iyo Holland iyo dalal kale, waxaa ugu cad cad Heldon Nhuck iyo R Mendes, Varela iyo Marco Soares.
Cayaartoyga kaliya ee gudaha dalka ka cayaara waa goohayaha labaad.
Way dhici kartaa in ay fursad u yeeshaan in ay heer sare ka gaaraan tartanka.
Morocco 14 goor ayay tartankan ka soo qaybgashay balse oo kaliya har ayay ku guulaysatay, waana sanadkii 1976.
Mar walba kubadda xirfadaysan oo heer sare ah ayay la soo shir tagtaa balse ka soo kow koobka ay qaaday heerka ugu sareeyay waxay gaartay 2004 markii iyada iyo Tunisia oo tartanka martigalinaysa ay final-ka isugu yimaadaan balse looga adkaaday cayaarta kama dambaysta ahayd.
Mar waxaa shaki galay u soo bixitaankooda tartanka kadib markii is aragii hore cayaartoodii ugu dambaysay ee Mozambique ay la yeesheen looga adkaaday 2-0 markaas oo la eryay tababrihii kooxda oo u dhashay Belgium, Eric Gerets, waxaa hadda tababare u ah Rachid Taoussi, oo is aragii labaad oo ka dhacay magaalada Marrakech hogaaminayay kooxda markaas oo 4-0 ay kaga badiyeen Mozambique, toosna ugu soo baxeen tartanka.
Tababare Rachid Taoussi wuxuu haystaa cayaartoy uu tashan karo, waxaana ka mid ah goolhayaha Nadir Lamyaghri oo captain-ka kooxda ah, Mehdi Benatia, Younes Belhanda iyo weeraryahanka u cayaara Liverpoppl Oussama Assaidi.
Morocco fursad wayn ayay u tahay ka qaybgalka cayaarahan sababtoo dalkood ayaa lagu qaban doonaa tartanka koobka qaramada Africa ee sanadkan 2015.
Kooxda qaranka dalka Angola, lix jeer oo hore ayay tartankan timid, balse heerkii ugu sareeyay ee ay gaareen wuxuu ahaa laba jeer sanadkii 2008 iyo sanadkii 2010 oo ay ka gudubtay heerka guruubyada balse ku hartay wareegga labaad ee sideedda koox ku tartamaan.
Waxaa sanadkan u qorshaysan in ay kaalinta sadexaad ugu yaraan galaan, tababaraha u dhashay Uruguay ee kooxda hogaamiya Gustavo Ferrin iyo kaaliyihiisa waxay leeyihiin waxaanu tallaabadaas u qaadnay si loo gaari heer ka wanaagsan tartankii ugu dambeeyay ee 2012.
Cayaartoyda uu ku tashanayo waxaa ka mid ah tababaruhu Manucho oo u cayaari jiray Manchester United balse hadda u safta kooxda Spain ee Real Valladolid, walina halis ku ah weerarka.
Djalma Campos ayaa isaguna ah nin laga baqo, balse cayaaryahanka ka dheela Brazil ee qadka dhexe Geraldo ay magic ka samayn kara cayaarahan.